Ipulazi lase-Bush elitholakala esigodini esithuli - I-Airbnb
Ipulazi lase-Bush elitholakala esigodini esithuli
Clarence Town, New South Wales, i-Australia
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Chanti
U-Chanti Ungumbungazi ovelele
Beka ibheke isigodi esithulile, i-Carinya Farm inikeza indawo ethulile yokuphumula nokujabulela imvelo.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ilala kahle abantu abangu-8 namagumbi okugezela amabili, ikhishi elinakho konke kanye ne-BBQ ku-veranda.
Uma ujabulela ukuba ngaphandle nokuhambahamba emahlathini, uCaryina unokuningi ongakuhlola. Sinamadama amaningana afanelekela amapikiniki, umhlambi omncane we-Angus ne-Belted Galloway ejulile, ama-gullies anokuthula, i-Iron Bark grove ekhethekile, kanye nezinkukhu ezingu-7 ezinoshizi kanye nezinyosi ezimbili.
Indlu nendlu ngeyakho ukuze uyijabulele.
Itholakala ngaphansi kuka-10mins uma ushayela usuka e-Clarence Town, indlu inamakamelo okulala amathathu, ihhovisi, indawo yokuwasha izingubo, ikhishi elinendawo yokudlela yesidlo sasekuseni, izindawo ezimbili zokuhlala kanye nezindawo zokudlela zangaphakathi nangaphandle.
Ikamelo lokulala ngalinye linendawo ehlukile yokubuka izihlahla futhi yonke imibhede inamashidi antofontofo kakotini.
Ihhovisi linedeski elilula ne-Wifi engenamkhawulo uma udinga indawo yokusebenzela.
Kukhona i-aircon edonswayo yezinsuku zasehlobo ezinesitimu. Umlilo oshisayo kancane ushisisa indlu phakathi nezinyanga ezipholile.
Indawo yotshani ifanele izingane ukuthi zizungeze futhi ilungele ipikiniki yokushona kwelanga neziphuzo ezinechibi nokubukeka kwesigodi.
Kunenqwaba yokupaka ngaphandle. Uma uhamba ngamabhayisikili, indawo evalekayo ingahlelwa.
Sihlose ukunciphisa ubunzima bethu endaweni ezungezile ukuze indlu isebenzise amanzi emvula ukugeza nokuphuza, amanzi edamu ukuze igcwale namandla elanga phakathi nosuku.
Sitholakala kalula ku-8mins ngaphandle kwe-Pacific Highway.
Le ndlu ilungele abantu abashadile noma imindeni efuna ukushaywa wumoya emahlathini noma indawo yokuhlola Izifunda ze-Hunter ne-Port Stephens noma imiphakathi ezungeze i-Barrington Tops National Park. Eduze kwe-Bucketts Way inikeza izwe elihle lokushayela emagqumeni aluhlaza amahle.
Uma ungena ngebhayisikili lasezintabeni, i-Dungog Common yimizuzu engu-25 yokuhamba ngemoto. Kukhona neminye imizila eminingi yokuhlola e-Wallaroo National Park engaphansi kuka-5mins yokuhamba.
Sinenhlanhla futhi yokuba amadolobha ambalwa kude ne-Distillery yabalimi efanelwe nakanjani ukubhukhela ukunambitha i-gin.
Isikhumulo sezindiza -
25Mins Dungog ejwayelekile
29Mins I-Distillery yomlimi- engaphansi
kuka-15Mins Isivini sase-Hunter Valley - cishe ihora
Anna Bay -
38Mins Nelson Beach
- 45Mins I-Stockton Beach -
30Mins Newcastle City
- 45Mins I-Paterson -
36Mins Sydney /Impersby - Ngaphansi kwamahora angu-2
Based in Newcastle with my young family and we enjoy living by the ocean.
Sitholakala ngocingo phakathi nokuhlala kwakho.
Kungaba nezikhathi lapho kuzodingeka sibe khona endlini ukuze senze imisebenzi ethile phakathi nokuhlala kwakho kodwa sizonikeza imininingwane kusenesikhathi.
UChanti Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-17052
Hlola ezinye izinketho ezise- Clarence Town namaphethelo